नायिका रेखा थापा के खोज्दैछिन् जाजरकोटमा ? – Todays Nepal
नेपाली सिनेजगतकी सुपरिचित नायिका रेखा थापा यतिबेला जाजरकोटमा छिन् । नायिका थापा किन र के खोज्दै जाजरकोट पुगिन् ? यौ कौतुहलताको विषय बनेको छ । यस्तै, उनी केही दिनअघि मात्रै इलामतिर झुल्किएकी थिइन् । यो पनि त्यस्तै कौतुहलताको विषय बनेको थियो ।
रेखा फिल्मस्को व्यानरमा निर्माण उक्त चलचित्रमा यथार्थ जीवनमा बालबिवाहको पीडा भोगिरहेकै वस्तीहरुमा यसको असली पात्र भेटिने रेखाको आशा छ । बालविवाहले पीडाक्रान्त भूमिमै चलचित्रको छायाङ्कन गर्ने सोच पनि उनले बनाएकी छन् । छोरीहरुको स्वर्णिम भविष्य निर्माणका लागि चलचित्रले योगदान दिने रेखाको विश्वास छ ।